एकैचोटि कायापलट त कहाँ हुन्छ र !
Thursday, 12 Apr, 2018 2:36 PM
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा भारत यात्रा गरिसकेका छन् । यो भ्रमण समाप्तिसँगै एउटा नयाँ बहसको थालनी भएको छ– के पहिलोचोटि भारतसँग यति कडिकडाउ र प्रस्ट कुरा राख्नेले सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा पछिसम्म पनि यही स्पिरिट कायम राख्लान् ? यो भ्रमणबाट उनले नेपालको स्वाधीन र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारतलाई सहजै मनाएर फर्किएकै हुन् ? सँगसँगै यो भ्रमणलाई नेपालको सन्तुलित कूटनीतिको दायराभित्र राख्ने ठोस कदमका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन ।
हुन पनि नेपाल पूर्णतया उत्तरतर्फ ढल्किएको भन्ने आरोप र त्यहीअनुरूप व्याख्या भइरहेका बेला ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न आतुरता देखाएको कुरा बाहिर आउनु र उनको आलोचना गर्नेहरूले यसैमा कटाक्ष गर्न थाल्नुलाई त्यति नकारात्मक रूपमा हेर्नु पनि हुँदैन । फेरि पनि केचाहिँ अहिलेका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण हो भने ओलीको भ्रमणको कारण नेपालभित्र विकसित राजनीतिक समीकरणमा कुनै दरार आउनु हुँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुन लागेको पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा विलम्बको कारण ओलीको दिल्ली बास बन्नु हुँदैन । उपेन्द्र यादवको फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउन त्यति धेरै चासो नदेखिनु मात्र होइन, माओवादी मन्त्रीहरूको असन्तुष्टिको भित्री कारणका रूपमा समेत दिल्लीको चलखेल जिम्मेवार भनी अनर्गल अथ्र्याइनु हुँदैन । दिल्लीले ओलीलाई दिएको उच्च सम्मानले अब नयाँ सरकारसँग साँच्चै नयाँ ढंगले काम गर्न भारत सरकार तयार छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
आफ्नो बर्चस्व पूर्णरूपमा नेपाली भूमि र राजनीतिक रंगमञ्चबाट ओझेल नपरोस् भन्ने दक्षिणको चाहनालाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । हरेक कुरालाई शंकाको घेरामा राखेर हे¥यौं भने हाम्रा निश्कर्ष सही हुन सक्दैनन् । जबसम्म विषयवस्तुलाई यथार्थतामा आधारित भएर होइन कि मनोगत र आत्मपरक ढंगले विश्लेषण गर्छौं त्यो अधुरो नै रहन्छ । त्यसैले नेताहरूको विदेश भ्रमण, उनीहरूले त्यहाँ राखेका कुरा, ती मुलुकहरूले दिएका प्राथमिकता र महŒवलाई वस्तुपरक ढंगले हेर्नु जरुरी छ । यसरी अध्ययन गर्ने हो भने ओलीले भारत जानुअघि नै भनेझैं नेपालीको शिर झुक्ने कुनै काम गरेर फर्किएका छैनन् । विगतका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जुन तहको दबाब जरुरी छ त्यसको मात्राचाहिँ नपुगेको हुन सक्छ । तैपनि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने पहिलो कदमबाटै धेरै अपेक्षा गर्नू आफैंमा ठीक होइन ।